Elton John hanambady efa ela mpiara-miasa - News Fitsipika
Elton John hanambady efa ela mpiara-miasa
Pop matoanteny Elton John, hoy izy, dia afehezo amin'ny fatotra amin'ny mpiara-miasa David manome izao fa ny nahaterahany Grande-Bretagne no ara-dalàna ny fanambadiana pelaka.
-Tampon'ny-fivarotana mpanakanto nilaza tamin'i NBC ny “ankehitriny” mampiseho fa “Ho manao izany isika dia moramora.”
“Fa izahay dia hanao izany ary ho faly fotoana,” John nanampy.
ny mpivady, izay manan-janaka roa miaraka, niditra tao an- sivily fiaraha-miasa amin'ny 2005.
Ny lalàna manan-tantara dalàna ny Fanambadian'ny Samy Lehilahy nitondra fiantraikany tany Angletera sy Pays de Galles tamin'ny Sabotsy, ny dingana farany ao amin'ny lava ady ho an'ny fitovian-jo ara-dalàna ho an'ny pelaka sy ny lesbians.
Sivily fiaraha-miasa ara-dalàna any no nanomboka 2005.
“Tena faly aho an'i Grande-Bretagne sy ny lalàna izay hitantsika tonga tany nisy satria isika efa efa niara-,” Jaona efa nilaza tamin'ny ampahany ny tafatafa napetraka ny rivotra Alatsinainy.
“Fa izao lalàna ho tonga amin'ny alalan'ny no mahafaly, ary tokony hankalaza azy io. Tsy tokony hilaza fotsiny, 'Oh, tsara sivily manana fiaraha-miasa. Tsy handeha izahay nanenjika hanambady.’ Ho hanambady.”
Manome nilaza tamin'ny Las Vegas Review-Journal amin'ny iray hafa fa akaiky tafatafa lanonana hitranga in May.
“Mihevitra aho fa zavatra Ho atao dia mandeha any amin'ny lisitra biraon'ny tany Angletera in May, ary ento ny ankizilahy miaraka amintsika, ary roa ny vavolombelona,” ny boky voalaza azy ho nanao hoe:.
Ity lahatsoratra ity, Elton John hanambady efa ela mpiara-miasa, ny mpilaza vaovao avy amin'ny AFP ary nandefa eto nahazoana alalana. Copyright 2014 AFP. Zo rehetra voatokana
20857	0 Elton John, fanambadiana
← 3000 Taona Old taolana Hita nolavadavahana amin'ny Cancer Hoy i Google Web Torkia intercepting ny sehatra →